true dynamics /zu-ZA/tools-for-life/dynamics/steps/the-dynamics.html read 1 4 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/dynamics_zu_ZA.jpg Ama-Dynamics Obukhona
Uyemukelwa kwi-Online Course yama-Dynamics Obukhona
Ayikaze ibe khona indlela yokuhlahlela impilo ungene ezingxenyeni zayo ngqo ngendlela ongabheka ngayo futhi ubone ukuthi yiziphi izingxenye zempilo yakho ezazenza kahle futhi ezazidinga ukunakwa.
L. Ron Hubbard uthole ukuthi konke okuphilayo, konke okuphilayo okukhona kulomhlaba, kulandela injongo eyodwa: ukusinda!
Kepha le njongo eyodwa enkulu ehlanganisa yonke impilo nokuphila nayo ingahlukaniswa izingxenye ezincanyana.
Njengoba uzofunda kulesi sahluko, uma usuwazi ukuthi zingakanani lezi zingxenye ezincane, ungabona ukuthi usinda kangakanani kunoma iyiphi yazo.
Ukwazi ukuthi yiziphi izingxenye zempilo kuzokusiza futhi uthathe isinqumo esifanele sokuxazulula noma iyiphi inkinga—noma eyodwa engalimaza noma icasule abanye abantu abangahle babandakanyeke kuleyo nkinga. Akukaze kube nephethini elisebenziseka futhi elilungile lokuxazulula izinkinga ezinjengale ngaphambili, ikakhulukazi eyodwa engabuye ifundiswe abanye ukuze nabo bayisebenzise. Akuzange kwenzeke lokhu kwaze kwaba u-L. Ron Hubbard uthola, okungukuthi, futhi wasibonisa ukuthi kungenziwa kanjani.
Kulesi sahluko, uzofunda ngamathuluzi wokukusiza usinde kahle futhi uthathe izinqumo ezifanele.
Amandla adudula zonke izenzo zakho nezinqumo zakho futhi into ebaluleke kakhulu empilweni ukusinda. Ukusinda kusho ukuhlala noma ukuqhubeka nokubakhona, ukuze uphile.
Sibiza lo mfutho wokushayela ukuze usinde ukugqugquzela. Kwi-Scientology, sifunde ukuthi kunezidingo eziyisishiyagalombili ezahlukene ezisigqugquzela ukusinda. Ngayinye yalezi ibizwa ngokuthi i-dynamic. Konke okwenzayo nakho konke ukukhetha okwenzayo kuqhutshwa isifiso sokusinda.
Ama-dynamics ayisishiyagalombili amelela amagumbi ahlukile empilweni yakho osinda kuyo:
I-Dynamic yokuQala iyisifiso sokusinda njengawe qobo lwakho. Kuyisifiso sokuba ngumuntu ngamunye futhi ufinyelele ezingeni eliphakeme kakhulu lokusinda isikhathi eside kunazo zonke ongasithanda.
Isibonelo, ukuzinakekela, ukugcina umzimba wakho uhlanzekile, ukulondolozwa kwamazinyo akho, ukudla ngendlela efanele, ukuphumula nokuthola ukunakekelwa lapho ugula kuyizinto zonke ozenzayo ezingakusiza ukuba usinde kangcono kwi-Dynamic yokuQala.
I-Dynamic yesiBili yisifiso sokusinda esizukulwaneni esilandelayo. Inezingxenye ezimbili: ucansi, kanye nomndeni, okubandakanya ukukhulisa izingane.
I-Dynamic yesiThathu yisifiso sokusinda njengengxenye yeqembu.
Ukwenza isibonelo, abantu abasehhovisi lakho, isikole sakho, idolobha lakho, isizwe sakho kanye neqembu lakho lebhola noma iqembu lomculo wonke ayingxenye ye-Dynamic yakho yesiThathu.
I-Dynamic yesiNe iyisifiso sokusinda njengelunga leSintu. Ngenkathi uhlanga olulodwa (abantu abanombala ofanayo noma ubuzwe) bethathwa njenge-Dynamic yesiThathu, zonke izinhlanga zeSintu ngokuhlangene zithathwa njenge-Dynamic yesiNe.
I-Dynamic yesiHlanu iyisifiso sokuphila kunoma yiluphi uhlobo lokuphila. Lokhu kungabandakanya zonke izinto eziphilayo, kungaba izilwane noma izitshalo.
Isibonelo, izinhlanzi, izinja, amakati, amabhubesi, utshani, izihlahla, izimbali kanye nezinambuzane konke kuyingxenye ye-Dynamic yakho yesiHlanu.
I-Dynamic yesiThupha iyisifiso somuntu sokuthuthukisa ukusinda kwakhe yonke indawo.
Ukwenza isibonelo, ukunakekela izingubo zakho, izicathulo, indlu, imoto, isikole, ihhovisi noma impahla yomunye umuntu konke kuyingxenye yezenzo zakho zokusinda kwi-Dynamic yesiThupha.
I-Dynamic yesiKhombisa ingabizwa ngokuthi yi-dynamic yezokomphefumulo. Isifiso sokuphila ngokokomoya noma isifiso sokuphila nokusinda ngokomoya. Lokhu kwehlukene nendawo yonke ebonakalayo futhi kungumthombo wokuphila uqobo.
I-Dynamic yesiShiyagalombili yilena eguquguqukayo okuvame ukuxoxwa ngayo njengoMdali, amandla ashukumisayo kaNkulunkulu noma Lowo Ongaphezulu, umoya odala konke. Kuyisifiso sokubakhona ungunaphakade.
Lama-dynamics ayisishiyagalombili abandakanya yonke imigomo yakho yokusinda nazo zonke izinto oziphilelayo.
Umuntu uzama ukusinda, ngandlela thile, kuwo wonke lama-dynamics ngezikhathi zonke.
Ama-dynamics angavezwa njengochungechunge lweziyingi i-Dynamic yokuQala iyisiyingi sokuqala ngaphakathi. Umuntu wenabela ngaphandle njengoba eqala ukusinda kwamanye ama-dynamics empilweni yakhe.